Dedaallo lagu deminayo khilaafka Galmudug oo ka socda Dhuusamareeb | Saxil News Network
Dedaallo lagu deminayo khilaafka Galmudug oo ka socda Dhuusamareeb
Sawir ay ka muuqdaan Madaxweynayaasha Xaaf iyo Farmaajo
Waxaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galguduud ka socda shirar lagu doonayo in xal loogu helo khilaafka ka taagan goorta ay dhacayso doorashada madaxtinimada maamul goboleedka Galmudug oo waayadan ba lagu kala aragti duwanaa.
Waxa shalay magaaladaa tagay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye, oo kulamo gaar gaar ah la qaadanayey wax garadka iyo culimaa’u diinka magaalada.
Isla magaalada waxa haatan ku sugan madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo masuuliyiin sar sare oo ka tirsan maamulka Galmudug oo uu ka mid yahay madaxa xukuumadda, Sheekh Maxamed Shaakir iyo sidoo kale sheekh caan ah oo la yidhaa Macallin Maxamuud oo ay si weyn u qadariyaan ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo shacabka deegaankuba.
Xaaf iyo masuuliyiinta ay isku aragtida yihiin ayaa waxay mudoba ku dhaliilayeen xukuumadda federaalka ah in ay farogelin taban ku hayso maamulka Galmudug oo ay ula dhaqanto si ka duwan maamul goboleedyada kale ee dalka.
Hase yeeshee ujeedada ugu weyn ee socdaalka wasiirku waxay tahay in uu ku qanciyo hogaanka Galmudug in ay aqbalaan in doorashada madaxtinimada maamul goboleedkaa la qabto 4 Juulaay 2019, wakhtigaas oo xukuumadda federaalku aaminsantahay in uu ku eg yahay muddo xileedkii madaxweynaha Galmudug.
Lahaanshaha sawirkaGALMUDUG TV
Dhanka kale se madaxweynaha Galmudug waa Xaafe, wuxu isagu qabaa in muddo xileedkiisu ku egtahay dabaqayaaqada sannadka 2012-ka. Laakiin xukuumadda federaalku waxay doonaysaa in ay hogaanka Galmudug ku qanciyo in shir dib u heshiisiin ah la qabto mar kale hadana la galo doorashada.
Walow ay jireen isku dayo hore oo la doonayey in ay xukuumadda federaalka ah iyo hogaanka Galmudug iskugu soo dhawaadaan, ayaa hadana waxaad moodaa in dedaalkan haatan socdaa si uga fursad fiicanyahay kuwii hore.
Hadaba waxa lagu sababaynayaa arintaas waa in fursaddani tahay in markii ugu horraysay ay si toos ah isku soo hor fadhiistaan hogaankii Galmudug iyo wasaaraddii federaalka iyo arimaha gudaha oo metalaysa xukuumadda dhexe. Waxa kale oo muuqata in ay xataa masuuliyiintii reer Galmudug qudhoodu ku kala aragti duwaanaa sida xalku yahay ay iyaguna joogaan Dhuusamareeb.
Wax garad iyo aqoonyahan badan oo qaarkood joogaan Dhuusomareeb iyo meelo kaleba oo ay BBC-du la xidhiidhay ayaa iyaguna rajo fiican ka muujiyey in dedaalkan haatan socdaa guulaysan karo oo xal kama dambays ah lagaga gaadhi karo arimaha taagan.
Guddoomiyaha xukuumadda Galmudug “Waxaan aqoonsanahay dowladda federaalka”